Systematic Analysis of Artifacts & Ceramics from an Archaeological Site
Sort artifacts from excavation squares and units into type of materials (ceramics/pottery, metal, glass, stone etc)
Sort ceramics into types according to material (determined by firing temperature): porcelain, stoneware, and earthenware
Sort the material types into sub-categories:
a. Earthenware:- fine paste and tempered earthenware
b. Stoneware:- buff non-tempered stoneware, tempered brittle stoneware, and Burmese glazed stoneware
c. Porcelain:- green, white, blue and white, and green-splashed etc
Divide into vessel types: storage vessels, cooking pots, libation vessels etc.
Divide into features and body sherds:
vessel parts: rims, bases, lugs etc
vessel types: jars, bowls, vases, cups, etc
size: rims (diameter) and bases
number of vessels (by type)
decoration (motifs and techniques):
chronology (how to date the ceramics?)
inter-site relationship (e.g. similar motifs/symbols/decoration or painting techniques/other types)
Sorting sheets (completion of)-->entered into database (after scanning)
တူးဖော်ပြီးသောနေရာကတူးဖော်ရရှိသည် ရှေးဟောင်းပစ္စည် နှင့်အိုးခြမ်းကွဲသို့ စနစ် တကျစစ်ဆေးအမျိုးအစားသို့အုပ်စုခွဲခြား ခြင်း
တူးဖော်ပြီးသောနေရာမှာ တူးဖော်သော လေးထောင့်ကွက်လပ်က ရရှိသည့် ရှေးလူ့အသုံးအဆောင်သော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို ရွေးသည်ရှင်းသည်။ -- ဖန်တီးသောအထည်းအမျိုးအစားအုပ်စု၌ ကိုစီစဉ် သည်သွင်းသည် (ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းများ, သတ္တု, ဖန်, ကျောက် စသည်ဖြင့်။)
ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းများကို အထည်းအမျိုးအစားအုပ်စု၌ နှင့်ရွေးရှင်းသည် (မီးအပူဒီဂရီ): တရုပ်ကြွေအိုး, စဉ့်အိုးခွက်ပန်းကန်, နှင့်မြေအိုး
အထည်းအုပ်စု၌ အမျိုးအစား အတန်းအစား ကို ခွဲသီးခြားသည်:-
မြေအိုး:- ရောနောမရှိ နှင့် ရောနောရှိ
စဉ့်အိုးခွက်ပန်းကန်:- အဝါ နုရောင်စဉ့်အိုး (ရောနောမရှိ), ကြွပ်သောစဉ့်အိုး (ရောနောရှိ), နှင့် မြန်မာစဉ့်အိုး
တရုပ်ကြွေအိုး:- အစိမ်းရောင်, အဖြူရောင်, အပြာနှင့်ဖြူရောင်, နှင့် အစိမ်းရောင် အပြောက်အကွက် စသည့်ဖြင့်။
အိုးအမျိုးအစားအုပ်စု၌ ခွဲသီးခြားသည်: - သိုလှောင်အိုး(ဖန်ဘူး), ချက်သည်အိုး, ရေစင်တော်သွန်းအိုး စသည့်ဖြင့်။
အိုးချမ်းကွဲကို အင်္ဂါရပ် နှင့် အိုးချမ်းကွဲ ဗြောင်ကို နှစ်မျိုးအတိုင်း ခွဲခြားလုပ်သည်။
အိုးအပိုင်းအစ:- အနားဝန်း, အခြေ, ကိုင်းကွင်း စသည့်ဖြင့်။
အိုးအမျိုးအစား:- ဖန်ဘူး, ပန်းကန်လုံး, ပန်းအိုး, ခွက်စသည့ဖြင့်။
အရွယ်ပမာဏ:- အနားဝန်း(အချင်း) နှင့် အခြေအပိုင်းအခြား။
အလှအပအဆတန်ဆာများ (မျက်နှာပြင် နှင့် ဇိုင်းပုံစံ):
သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များကို ခေတ်၊ ကာလသတ်မှတ်သည့်ပညာရပ်။ (ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းများကို ဘယ်လိုသက်တမ်းသတ်မှတ်နိုင် လား?)
တစ်နေရာနှင့် တခြားနေရာ၏ အဆက်အသွယ်ဆက်ဆံရေး (ဥပမာ တူသောအလှတန်ဆာများ / အမှတ်များ / အလှပြင်ဆင်မှု ဖြစ်စေနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု / အခြားပုံစံအုပ်စု။
Sorting sheets ပြီးပြီ၍ အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်ပြုစုသည် --> ကွန်ပျူတာဖြင့် အချက်အလက်များ စီစစ်ခြင်း အဖြေရှာခြင်း။ --> ကွန်ပျူတာထဲတွင် အသင့်သုံးနိုင်ရန် ထည့်ထားသော အချက်အလက်များ ရသည်။
Ceramics Analysis Procedure Earthenware
Fine Paste Earthenware Tempered Earthenware
Fine Paste Earthenware = ritual (ceremonial) or elite usage
Tempered Earthenware: utilitarian (everyday use) or non-elite (common person)
The above comparison or division isahypothesis to be tested
Temper isatype of inclusion
Inclusions can be divided into two kinds
Intentional Non-intentional (accidental)
Questions to ask about temper/inclusions:
What kind of temper was used?
Used pottery bits/grog
Does the temper come fromalocal source or non-local source?
If different earthenware sherds contain the same temper, what does it mean?
CLASSIFICATION OF EARTHENWARE
1. Storage vessels
Industrial artifacts: tuyere & crucibles
Display artifacts: figures and statues
Pottery discs (called “gacuk” in Indonesia)
Architectural features: pipes, roof tiles, wall tiles, floor tiles
CLASSIFICATION OF EARTHENWARE INTO FEATURES & BODY SHERDS
Why do we separate ceramics into two categories: features and body sherds?
In the case of features, we can determine the following: -
2. Function of vessels
3. Size of the vessels
4. Number of vessels (by type, sub-types [variations of the same kind of vessels], and sizes)
5. Decoration (classify by decoration techniques)
Examples of decorative techniques (surface treatment):
Decoration (classify by decorative motifs)
Examples of decorative motifs:
Based on the above list of features and the context (stratigraphic layer) in which these artifacts were found, it is possible to determine the following:-
Chronology and dating of the sherds and earthenware types (according to stratigraphic context)
Inter-site relationship based on the type of vessels found in situ (in various locations of the site)
If there were only body sherds, what kind of tests can you run?
Porosity: how much water can the pot absolve?
Mineralogy: comparison of inclusions and temper
EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence)
Pixe-Pigme (Proton-induced X-Ray and gamma rays)
Petrography (slice of pottery at 0.03mm)
Scanning Electron Microscopy (SEM) / Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDS)
What is the firing temperature? Conductafiring test in an oven to determine firing temperature ofasherd.
Hardness test: how to test the hardness? Kit available to test the sherd’s hardness
ကြွေထည်မြေထည်အတတ်စီစစ်ချက်လုပ်ထုံး လုပ်နည်။။ မြေအိုး
ရိုးရာဓလေ့အသုံးပြုသောပစ္စည်းအရာ (အခမ်းအနားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) ချမ်းသာသူတို့ သုံးသောပစ္စည်းအရာ
နေ့စဉ်သုံးသောအိုးပစ္စည်းအရာ သာမန်လူအများသုံးသောပစ္စည်း အရာအိုးများ
အဆိုကြမ်းအနုမာန အယူအဆကို စစ်ဆေးခြင်း
ရောနောထည့်သွင်းပါသည်အရာအနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမေးစရာကို မေးရမလဲ။
၁၊ ဘာရောနောကို ထည့်ထား / သုံးသလဲ။
ဗဟန်းကျောက် / သံထိုက်ကျောက်
ဆန်အပွင့် / ဆန်အခွံ
၂၊ အိုးကိုလုပ်သည့်နေရာ ဘယ်မှာလဲ။ ရောနော ဘယ်နေရာကို ရမလဲ။ ရောနောဒီဒေသခံဒေသတွင်းမှာရသလား။ တခြားနေရာက ရသလား။
၃၊ အိုးချမ်းကွဲ တစ်စု နှင့် နောက်တစုရောနောကို အတုတုပဲရင်, ဘာအဓိပွယ်အနက်ကို ရမလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲ?
၃၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းစက်များ
၄၊ ပြခန်းပစ္စည်း:ရုပ်တုငယ် ဆင်းတု"
၈၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ:- ပိုက် / အမိုးအုတ်ကြွပ်ပြား / နံရံကြွပ် / ကြမ်းကြွပ်
မြေအိုးကိုအင်္ဂါရပ် နှင့် အိုးချမ်းကွဲဗြောင်ကို ခွဲခြား အမျိုးအစား အုပ်စုခွဲခြင်း
အနားဝန်း / အခြေ / ပါးစပ် / အနို့ / လည်ပင်း
အနားဝန်း / အခြေ / ပါးစပ် / အဖုံး / ကိုင်းကွင်း / အနို့ / လည်ပင်း
ဘာဖြစ်လို့စိုးချမ်းကွဲကို အင်္ဂါရပ် နှင့် အိုးချမ်းကွဲဗြောင်ကို နှစ်မျိုးအတိုင်းခွဲခြားထားသလဲ?
အိုးချမ်းကွဲအင်္ဂါရပ်ကို ရှိရင် အောက်ဖော်ပြပါ:
၃၊ အိုးများပမာဏ / အရွယ်
၄၊ အိုးအများအပေါင်း (အိုးအမျိုးမျိုး အစဉ်အတိုင်းခွဲခြားလုပ်သည် - အိုးအမျိုး, အမျိုးခွဲ, နှင့်ပမာဏအရွယ်များ)
၅၊ အလှအပအဆင်တန်ဆာများကို ခွဲခြားအမျိုးအစားအုပ်စုခွဲခြင်း - မျက်နှာပြင်
အလှအပအဆင်တန်ဆာ (မျက်နှာပြင် နည်ပညာ) ပံုစံဥပမာများ:-
ကပ်၍ချုပ်၍ ပုံစံဖော်ကပ်ပန်း ဖော်ထားပေးသည်
၆၊ အလှအပအဆင်များကို ခွဲခြားအမျိုးအစားအုပ်စုခွဲခြင်း- ဒီဇိုင်းပုံစံ
အိုးချမ်းကွဲ၏ အင်္ဂါရပ် နှင့် အိုးချမ်းကွဲတွေ့သည့် အထပ်အလွှာလိုက်ဖြစ်သည့နေရာ မှတ်သည်ပြုစုသည် အထက်တွင်ဖော်ပြပါ စာရင်း အခြေခံပြုသည်ပြီးပြီ အောက်ဖော်ပြပါ:-
၁၊ အိုးချမ်းကွဲများကို သက်တမ်းသတ်မှတ်နိုင်သည် (အလွှာလိုက်အထပ် အဆိုအရ)
၂၊ (တစ်နေရာတွေ့သောအိုးချမ်းကွဲများ နှင့် နောက်တစ်နေရာမှာတွေ့သောအိုးချမ်းကွဲများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးရင်) တစ်နေရာနှင့် တခြားနေရာ၏ အစက်စသွယ်မှုနှင့် သက်တမ်းသတ်မှတ်အချိန်ကာလ တစ်ခုသိရသည်
အိုးချမ်းကွဲဗြောင်များပဲရှိသည်ရင် ဘာစစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်နိုင်သလဲ?
၁၊ စိမ့်ဝင်နိုင်မှု / စိမ့်ဝင်စွမ်း:- ဒီအိုးကို ရေ ဘယ်လောက် အရည်စုပ်ယူနိုင်သလဲ?
Examine under microscope (microscope လိုချင်သည်)
၃၊ အိုးချမ်းကွဲကို လုပ်ထားသည် မီးအပူဒီဂရီ ဘယ်လောက်လဲ? အပူဒီဂရီစစ်ဆေးခြင်း ဘာလုပ်နိုင်မလဲ? လျှပ်စစ်ဖိုထဲကို အိုးချမ်းကွဲနမူနာ တစ်ပိုင်းတစ်စကို စစ်ဆေးမူလုပ်မှာ။
၄၊ အိုးချမ်းကွဲကမာခြင်းသို့ စစ်ဆေးနိုင်သည် (ကိရိယာရှိသည်)
Data Analysis and Statistics (Using Sorting Sheets)
Analysis of total amount of artifacts across the entire AKP site:
A. Distribution of ALL types of artifacts across the site in terms of spatial distribution:
What does this mean? --> hypothesis formation
B. Total weight by types: --> comparison
i. distribution pattern
C. Total number by material (type of material): comparison
Comparison according to material:
A. Weight versus number of earthenware (fine paste versus tempered earthenware)
B. Weight and number of various stoneware categories; etc.
i. by units (percentage)
ii. overall: whole site (percentage)
Comparison by types of vessels; e.g. libation vessels versus globular vessels versus long-necked vessels
C. Spatial distribution and density
Comparison of distribution by decorative motifs and decoration techniques
Stratigraphic distribution (if available)
Comparison of variation on particular decorative motifs and decoration technique/technology
ပါသည်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်ပြုစုပြီး အချက်အလက် စစ်ဆေးမှု
၁၊ အနော်ရထားနှင့်ကျန်စစ်သား၏နန်းတော် တူးဖော်သောနေရာတစ်ခုလုံးက တူးဖော်ရရှိသည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအားလုံကို စိစစ်သရုပ်ခွဲသည်။
A. ပုဂံနေရာတစ်နေရာလံုမှာ တူးဖော်ရရှိသည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ အမျိုးမျိုးအားလုံ ပျံနှံမှု အကွားအဝေငှခြင်
အိုးချမ်းကွဲ ပျံနှံ့ သိပ်သည်းခြင်း။
အမျိုးမျိုး အမျိုးစုံ အမျိုးပြားခြင်း
ဘာအဓိပွယ်အနက်ကို သိရမလဲ? --> အနုမာန အယူအဆ အဆိုထုတ်သည်။ အဆိုကြမ်းခံခြင်း
B. အမျိုးမျိုးနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန် စုစုပေါင်း။ --> နှိင်းယှဉ့်ချက်
အိုးခြမ်းကွဲ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ ပျံနှံ့ သိပ်သည်းခြင်း။
C. ပစ္စည်းအထည်နှင့် ပမာဏလုံးဝစုစုပေါင်း (အထည်အမျိုးအစား):- နှိင်းယှဉ်ချက်
၂၊ အထည်အတိုင်း နှိုင်းယှဉ့်ချက်
A. မြေအိုး(ရောနောရှိနှင့်ရောနောမရှိ) အလေးချိန်နှင့် ပမာဏလုံးဝစုစုပေါင်း
B. စဉ့်အိုးခွက်ပန်းကန် အမျိုးစုံအမျိုးမျိုး၏ အလေးချိန်နှင့် ပမာဏစုစုပေါင်း
i. (တစ်)ခု စသောအစုအဝေးများ (အချိုး)
ii. တစ်တူးဖော်ရှေးဟောင်းနေရာလုံး (အချိုး)
၃၊ အိုးနှိုင်း အမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလည်း နှိုင်းယှဉ့်ချက်လုပ်သည်-ရေစင်တော်သွန်းအိုးများလည်းကောင်း လုံးဝန်သောအိုးလည်းကောင်း လည်ရှည်အိုးလည်းကောင်း
B. တစ်ခုတစ်ခု ပမာဏစုစုပေါင်း
C. ပျံနှံ့မှုအကွားအဝေသေငှခြင် နှင့် ပျံနှံ့ သိပ်သည်းခြင်း။
၄၊ အလှအပအဆင်တန်ဆာများ (ဒီဇိုင်းပုံစံ နှင့် မျက်နှာပြင်) အတိုင်း အကွားအဝေသေငှခြင်သို့ နှိုင်းယှဉ့်ချက်
၅၊ အထပ်ထပ်အတွင်း အကွားအဝေ ပျံနှံ့မှု (ရှိသည်ရင်)
၆၊ တစ်စုချင်းအလိုက်ဖြစ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံ နှင့် မျက်နှာပြင် အလှအပအဆင်တန်ဆာမှုသို့ နှိုင်းယှဉ့်ချက်လုပ်ရမယ်။
Createadatabase. For this project, we use Microsoft Excel to input our data. It isasimple application which allows for easy migration to new operating systems, has good cross-platform support, and is easily available.
The fields for our database are as follows (an example of our database will be made available soon via the following link: MSATP Database):
MSATP Statistics of Wares
Description regarding field
Square/Unit Excavation unit in the site, e.g. II AF-16/4
Level Stratigraphic layer/level information (depth), e.g. Layer2/ 80cm
fine paste earthenware
coarse tempered earthenware (cooking pots)
buff stoneware (non-tempered)
brittle stoneware (tempered)
glazed stoneware (Burmese)
underglazed black and white
others e.g. enameled, copper-red underglazed, etc
deity in niche
lozenge within serrated frame
matted lines and subdivided rectangles
parallel lined “ladder”
rice plant in paddy fields
serrated tooth (“shark teeth”)
star and radiating sun
Artifact Number e.g. single artifact number or range of numbers
Excavation date yy-mm-dd
Image (Yes/No) whetheraphoto has been taken
Image file name e.g. AKP11011.jpg
Image to insertathumbnail image
The data in Excel can be compiled into statistics of the proportions of different types of wares.
For different types of wares, the proportions of materials can be compiled according to features versus body sherds.
Statistics can also be compiled according to the proportions of materials temporally (vertical distribution in different stratigraphic layers) and spatially (across the site and in different excavation units).
Statistics is compiled based on the proportions of features to body sherds distributed temporally and spatially.
ကွန်ပျုတာဖြင့် အချက်အလက်များ စီစစ်ခြင်း။ အဖြေရှာခြင်။
ကွန်ပျုတာထဲတွင် အသင့်သုံးနိုင်ရန် ထည့်ထားသော အချက်အလက်များ ကို အစပြုသည်။ ဒီ AKP စီမံကိန်စီမံချက် အတွက် Microsoft Excel အသုံးချနိုင်ရန် ရေးဆွဲထားသော ညွှန်ကြားချက်အစု ကို သုံး သည်။ ဒီ လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ် က အသုံးပြုလွယ်ရင် ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ် ရေးစနစ် ပရိုဂရမ်များ အသစ် ကို ပြောင်းလဲစေလည်းကောင်း၊ PC နှင့် Mac သုံးနိုင်သည်လည်းကောင်း၊ လွယ်လွယ်ကူကူသောအဝယ်အရလည်းကောင်း ဖြစ်သည်
ကွန်ပျုတာထဲတွင် အသင့်သုံးနိုင်ရန် ထည့်ထားသော အချက်အလက်များ မှာ အနုစိတ်သော ရှင်းပြချက် ဖော်ပြချက် အောက်ပါအတိုင်း (ကျွန်မတို့၏အသင့်သုံးနိုင်ရန် ထည့်ထားသော အချက်အလက်များ လည်း ဥပမာ တစ်ခု ကို internet link အဆက်တွေ့နိုင်ရနိုင်မယ်: MSATP Database):
MSATP ကြွေမြေစဉ့်စသည့်အိုးများ ကို ကိန်းဂဏန်းစာရင်းဇယား ကိုပြုစုစုဆောင်းခြင်
လေးထောင့်ကွက်လပ် / ယူနစ် တူးဖော်နေရာတွင်မှာ တူးဖော်သည့်ယူနစ် ဥပမာ II AF-16/4
အထပ် တူးဖော်နေရာအထပ်အလွှာလိုက်အချက်အလက် (အနက်) ဥပမာ အထပ်၂ / ၈၀cm
ပြဒါးဖန်ဘူး (ရောနှောထားသည့် အရာရှိ)
စဉ့်အောကမှာအနက်ရောင်စဉ့် နှင့် ဖြူရောင်အိုးကိုယ်
အခြား ဥပမာ ကြွေရည်သုတ်သည်၊ စဉ့်အောကမှာကြေးနီရောင်စဉ့် နှင့် ဖြူရောင်အိုးကိုယ်၊ စသည်
အလှပြင်ဆင်မှု / မျက်နှာပြင်
ပုံသဏ္ဏာန်များ နှင့် ထပ်ဆင့်ပိုင်းခြားသည့် ထောင့်မှန်စတုဂံများ
ကြယ် နှင့် တောက်ပ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သည့် နေ
အလေး (gram တွင်)
အလေးအားလုံးပေါင် (gram တွင်)
ရှေးလူ့အသုံးအဆောင် ရှေးပစ္စည်း၏နံပါတ် ဥပမာ ရှေးပစ္စည်း၏နံပါတ် တစ်ခုတစ်ခုသည် သို့မဟုတ် ရှေးပစ္စည်းလည်း တစ်နံပါတ်မှ နောက်တစ်နံပါတ်အထိများ သို့မဟုတ
ဓာတ်ပုံ (ရှိ/မရှိ) ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြီလား
ဓာတ်ပုံ၏နာမည် ဥပမာ AKP11011.jpg
ဓာတ်ပုံ ဓာတ်ပုံ၏အကျဉ်းသောဖော်ပြချက် ကစာကို ထည့်သွင်းသည်
Excelမှာ အချက်အလက်များ ကြွေထည်မြေထည် ပစ္စည်းသည့် အချိုးအစားကျကျ အတိုင်းအဆ က ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ကို ပြုစုကျမ်းပြုသည်။
အမျိုးမျိုးကြွေထည်မြေထည်သည့် အတွက် အင်္ဂါရပ်အရာရှိအိုးခြမ်းကွဲများ နှင့် ကိုယ်ထည်အိုးခြမ်းကွဲများ ကို အချိုးအစားကျကျ အတိုင်းအဆ သောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် သို့ ပြုစုသည်။
ကြွေထည်မြေထည်ရှေးပစ္စည်းသည် အထပ်ထပ်ကွဲပြားသော အထပ်အတွင်း အကွားအဝေ ပျံနှံ့မှုလည်းကောင်း၊ ပျံနှံ့မှုအကွားအဝေသေငှခြင် နှင့် ပျံနှံ့ သိပ်သည်းခြင်း (တူးဖော်နေရာတစ်နေရာမှာ တူးဖော်ယူနစ်အမျိုးမျိုးများ) လည်းကောင်း ကို အချိုးအစားကျကျ အတိုင်းအဆ သောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်သို့ ပြုစုနိုင်သည်။
ကြွေထည်မြေထည်ရှေးပစ္စည်းသည် အထပ်ထပ်ကွဲပြားသော အထပ်အတွင်း အကွားအဝေ ပျံနှံ့မှုလည်းကောင်း၊ ပျံနှံ့မှုအကွားအဝေသေငှခြင်လည်းကောင်း မှာ အင်္ဂါရပ်နှင့် ကိုယ်ထည်အိုးခြမ်းကွဲ ကို အချိုးအစားကျကျ အတိုင်းအဆ သောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်သို့ ပြုစုရသည်။